History & Culture Ndị a ma ama
Onye a makwaara dị ka Wallace Hume Carothers
A na-ele Wallace Carother anya dịka nna nke sayensị nke ndị polymer na-eme nke nwoke na onye na-ahụ maka nylon na neoprene. Nwoke ahụ bụ ọkà mmụta ọgwụ, onye na-emepụta ihe na ọkà mmụta na mkpụrụ obi nwere nsogbu. N'agbanyeghị ọrụ dị ịtụnanya, Wallace Carothers nwere ihe karịrị iri ise akara ala; onye ahụ mebiri emebi ndụ ya.
Wallace Carothers - Azụ
A mụrụ Wallace Carothers na Iowa ma nyochaa ya na mbụ wee gụchaa sayensị (mgbe ọ na-ezi ajụjụ ọnụ) na Tarkio College dị na Missouri.
Mgbe ọ ka na-amụ akwụkwọ na-adịghị, Wallace Carothers ghọrọ isi nke ngalaba ọrụ onwu. Wallace Carothers bụ nkà na onwu ihe, ma ezigbo ihe mere eji mee ya bụ ụkọ ọrụ n'ihi agha ahụ (WWI). O nwetara ma na Master PhD na Mahadum Illinois ma ghọọ prọfesọ na Harvard, bụ ebe ọ malitere nyocha ya n'ime usoro ọgwụ nke polymer na 1924.
Wallace Carothers - Ọrụ maka DuPont
N'afọ 1928, ụlọ ọrụ na-ahụ maka DuPont mepere ụlọ ọrụ nnyocha maka mmepe nke ihe artificial, na-ekpebi na nchọpụta bụ isi bụ ụzọ aga - ọ bụghị ụzọ nkịtị maka ụlọ ọrụ na-eso n'oge ahụ.
Wallace Carothers hapụrụ ọrụ ya na Harvard iji duzie nyocha nke Dupont. Enweghị ihe ọmụma banyere mkpụrụ ndụ polymer nwere mgbe Wallace Carothers malitere ọrụ ya n'ebe ahụ. Wallace Carothers na ndị otu ya bụ ndị mbụ na-enyocha ụlọ acetylene ezinụlọ chemicals.
Neoprene & naịlọn
N'afọ 1931, DuPont malitere ịmepụta neoprene, ihe mgbakwunye nke Carothers dere. Ndị otu nnyocha ahụ gbalịrị gbanwee mgbalị ha na-eme iji gbanye mgbọrọgwụ nke nwere ike dochie silk. Japan bụ isi iyi nke silk na United States, mmekọrịta dị n'etiti mba abụọ ahụ na-agbawa.
Ka ọ na-erule afo 1934, Wallace Carothers emeela ihe dị mkpa iji mepụta silk ọlaọcha site na ijikọta amine, hexamethylene diamine na adipic acid iji mepụta eriri ọhụrụ nke usoro usoro polymerizing malitere ma mara dị ka mmeghachi azụ. N'ime mmeghachi omume nke ụbụrụ, mkpụrụ ndụ nke ọ bụla na-ejikọta na mmiri dị ka ihe mmepụta.
Wallace Carothers nụchara usoro ahụ (ebe ọ bụ na mmeghachi omume mmiri ahụ na-alaghachi na ngwakọta ma na-eme ka ihe ọkụkụ ahụ dị ike) site n'ịgbanwe ihe ndị ahụ ka mmiri wee sie ike ma wepụ ya maka ihe ndị siri ike.
Dị ka Dupont si kwuo
"Nylon si na nchoputa banyere polymer, umu ogwu di iche iche na ogugu ndi ozo, nke Dokita Wallace Carothers na ndi otu ibe ya mere na mmalite nke afo 1930 na DuPont's Experimental Station. N'April 1930, onye oru nlekota aka na esters - ihe ndi na-emeputa acid na mmanya ma ọ bụ phenol na mmeghachi omume na mmiri - chọpụtara polymer nke nwere ike ịdọta n'ime eriri. 1935, Carothers chọtara eriri polyamide siri ike nke na-eguzogide ma ọkụ na ihe nkwụsị.
Ọ tụlere ihe karịrị 100 polyamides dị iche iche tupu ịhọrọ otu olon] maka mmepe. "
Nylon - Igwe Ebube
N'afọ 1935, DuPont kwadoro eriri ọhụrụ ahụ dị kaịlọn. A na-ewebata nịlọn, ọrụ ebube, na ụwa n'afọ 1938.
Leekwa - Akụkọ nke Nylon Stockings
Na isiokwu 1952 nke Fortune Magazine, e dere na "naịlọn na-agbaji ihe ndị dị mkpa dị ka nitrogen na carbon sitere na kol, ikuku, na mmiri iji mepụta usoro ihe omimi ọhụrụ nke ya n'onwe ya. ihe dị n'okpuru anyanwụ, na ihe mbụ mmadụ ji emepụta ihe na-emepụta ihe kachasị ọhụrụ nke mmadụ. N'ime ihe karịrị puku afọ anọ, textiles ahụwo nanị ihe atọ dị mkpa ma ọ bụghị mmepụta ihe dị iche iche: ụzụ meriri, ihe eji emepụta sịntet, na eriri. "
Wallace Carothers - Ọgwụgwụ Ọjọọ
Na 1936, Wallace Carothers lụrụ Helen Sweetman, onye ọrụ ibe na DuPont.
Ha nwere nwa nwanyi, ma o di nwute na Caro Carother gburu onwe ya tupu a mụọ nwa mbu a. O yikarịrị ka Wallace Carothers bụ onye na-eme ihe ike nke ukwuu, na ọnwụ nwanne ya nwanyị na 1937 gbakwụnyere ịda mbà n'obi ya.
Onye nchọpụta ibe Dupont, bụ Julian Hill, kwuru na Carother na-eburu ihe mechara bụrụ cyanide. Hill kwuru na Carothers nwere ike depụta ndị ọkachamara a ma ama nke gburu onwe ha. N'April nke afọ 1937, Wallace Hume Carothers kpochapụrụ ihe ọjọọ ahụ n'onwe ya ma gbakwunye aha ya na ndepụta ahụ.
James Clerk Maxwell, Nna-ukwu nke Electromagnetism
John Napier - Akpụkpọ anụ Napier
Ònye mepụtara Green Garbage akpa?
Ndị na-achọpụta ihe: A ruo Z
Ihe ndekọ banyere Luigi Galvani
Ihe ndekọ nke Edmund Cartwright
Ihe Ndazi nke Thomas Alva Edison
Biography nke Louis Pasteur
Ụtọ Ntọala maka Ịga nke Ọma
Egwuregwu Ọhụụ na Otú Ọ Na-arụ
Ego ole ka edere edere na-enwe n'asụsụ Bekee?
Ihe ngosi osisi ngosi: Frida Kahlo
"Maka otu ụbọchị ọzọ" nke Mitch Albom - Book Review
Ngwurugwu na-eme ka ndị mmadụ mara ihe na ihe atụ
The 'Ladies Tees' na Goofu na ihe mere ha ekwesịghị ka a kpọọ ya
Ndị ahịa Gọọmenti na Ahịa US
Mee Ka Nwa Gị Nwee Ihe Kasị Mma Ka E Ji Mee Ihe
Ihe Egwú Egwú: A Osisi
Ndị Sprites na ụmụnne ha
College Wheaton Illinois GPA, SAT na ACT Data
Olee Otú Snake Venom Si Arụ Ọrụ?
Ònye Bụ Queen nke Sheba?
Ụmụ anụmanụ nke Ala mmiri Amazon
Esi Nyochaa Onu ogugu
Nhazi akwukwo ndi ozo maka Izi ihe ESL - Omenala
3 Ụzọ iji nweta ihe ndị ọzọ na-arụ site na windo windshield gị
SAT Scores maka Ịbanye Massachusetts kọleji
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwu